Intandokazi ifana newozawoza kwabesifazane asebeke bayihambela | Isolezwe
Intandokazi ifana newozawoza kwabesifazane asebeke bayihambela
Isolezwe / 30 August 2012, 1:21pm / LUNGI LANGA
ABASOZE bahlukana nokuhamba imicimbi ye Ntandokazi Women's Club laba bangani (kusukela kwesokunxele) uNksz Sonto Chamane, uNkk Sonto Chalufu noNksz Nosisa Thobela. Bathathwe ngesikhathi behambele lo mcimbi obusehhotela i Kapenta Bay e Port Shepstone ngempelasonto
UNGAFUNGA ukuthi abesifazane abahambela umcimbi weSolezwe, Intandokazi Women’s Club ngabantu abakade bazana kanti abanye babo basuke bebonana okokuqala bese bengabe besahlukana, kepha okunye ngabo wukuthi kabaphinde bahlukane nalo mcimbi.
Izintandokazi ezintathu ezingothisha, uNksz Sonto Chamane (51) waseMariannridge, uNkk Sonto Chalufu (51) wasenkabeni yeTheku noNksz Nosisa Thobela (50) waseMlazi kwa-W, bathi abasoze bahlukana neNtandokazi.
Baneminyaka engaphezu kweyisishiyagalombili behambela lo mcimbi kanti bawulandela noma ngabe ukuphi nesifundazwe.
Uhleka kancane uNksz Thobela uma echaza ukuthi baqala kanjani ukuhamba imicimbi yeNtandokazi esibe yingxenye yempilo yabo abangasakwazi ukuphila ngaphandle kwayo.
Uthi yena wafakwa ngumngani wakhe abakhule naye, uNksz Chamane emicimbini yeNtandokazi.
“Sibe sesihlangana noSonto Chalufu sase siba ngabangani abangahlukani kusukela lapho. Manje sesiyazi, sibheka ukuthi omunye umcimbi olandelayo ukuphi bese sithenga amathikithi ethu, senze amalungiselelo okuwuhambela ngisho noma ngabe ukuphi,” kusho uNksz Thobela.
Kusukela baqala ukuhambela Intandokazi bathi awukho osuke wabaphutha futhi kabazimisele ngokuthi kube khona oyobaphutha esikhathini esizayo.
UNksz Chamane uthe bafunda lukhulu futhi bathola ithuba lokwazana nabantu abahlukene.
“Sifunda lukhulu uma size kulo mcimbi ngoba konke okusuke kwenziwa kuyahluka ngaso sonke isikhathi. Akugcini ngokuthi sihambe nezimfundiso zakhona kepha sigoduka sithole abangani abasha njalo kanti futhi kusinika ithuba lokutholana nabanye abantu abanemicabango efanayo nabenza umsebenzi esiwenzayo,” kuchaza uNksz Chamane.
Bakhuthaza abanye besifazane ukuthi bangadembeseli ukuhambela lo mcimbi njengoba bethi bona kuyimanje sebezitshelile ukuthi bayaya kolandelayo ngo-Okthoba kulo nyaka yize kungakashiwo ukuthi uzoba kuphi.
Bathi abahambela lo mcimbi bayanda ngoba sebebaningi abesifazane abawuhambelayo uma beqhathanisa nesikhathi besaqala ukuwuhambela ubanjelwa eRoyal Hotel.
UNksz Zandile Nembe oyiMarketing Executive yeSolezwe uthe bayakubonga ukwethembeka kwalezi zintandokazi kulo mcimbi ngoba bawuhambe kusukela uqala kuze kube manje.
“Siyakubona ukuzinikela kwabo ngoba bebelokhu bekhona kusukela waqala nami ngafika ngatshelwa ukuthi kukhona lezi zintokazi ezingasali kulo mcimbi,” kusho uNksz Nembe.
Ubonge bonke abanye abahambela lo mcimbi njengoba ethe zikhona nezinye izintandokazi ezilokhu ziwuhambela, wakhuthaza nabasaqala ukuthi baqhubeke nokuwuhambela.
Phakathi kwabaxhasi balo mcimbi kukhona abakwa-Inecto, Spekko Rice, Ithala naboMnyango wezoBulungiswa KwaZulu-Natal.